ခံစားမှုနှင့်တိုက်ဆိုင်သော သီချင်းများရှယ်ရန် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > .:::ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ:::. > သီချင်းများ > စိတ်ကြိုက်သီချင်းများ > ခံစားမှုနှင့်တိုက်ဆိုင်သော သီချင်းများရှယ်ရန်
View Full Version : ခံစားမှုနှင့်တိုက်ဆိုင်သော သီချင်းများရှယ်ရန်
05-10-2008, 07:47 PM
ဒီနေရာလေးမှာ မိမိတို့ခံစားချက်နှင့်တိုက်ဆိုင်တဲ့သီချင်းများ တင်ပေးပါ..အားလုံးဝိုင်းပြီးကြိုးစားကြတာပေါ့ဗျာ... :) :)
05-11-2008, 07:37 PM
www.myanmarmp3.net က မြန်မာသီချင်းတွေ အများကြီးနားထောင်လို့ ရတဲ့နေရာလေးပါ
ရွှေထိုက်ဆိုထားတဲ့ မင်းမရှိရင်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး မိုက်တယ်ဗျ ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ အဟဲ ကြော်ငြာတာဟုတ်ဖူးနော်..
တကယ်မိုက်တယ်..စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်တော့ဗျာ (http://www.mediafire.com/?5ydmv93m0nv)
05-12-2008, 10:54 PM
ဒီသီချင်းလေးကတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ နံမည်ကြီးနေတဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
ဒီသီချင်းလေးနားထောင်ဖြစ်အောင် စပို့ပေးတာကတော့ ရန်ကုန်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း
အောက်မှာ သီချင်းစာသား ကျွန်တော်ရေးထားပေးပါတယ်။
ရံရွေလယ်၊ ထယ်ဝါစွာ ဆင်စွယ်နန်းအိမ်၊
ကျူထရံတွေ ကာရံကာ ဓနိမိုးအိမ်၊
နှလုံးသားတွေ နွေးထွေးရင် ဒါဟာလည်းအိမ်၊
အိမ်တစ်အိမ်မှာ မှီတည်ရာ ဘာသာတရားတွေ၊
ကမ္ဘာမြေကို ဖြူစင်စွာ အကြင်နာမျှဝေ၊
ပိုင်ဆိုင်ရာ တွယ်တာရာ ဒီရင်သွေးတွေ၊
ဆည်းလည်းသံ လှိုက်ခတ်စေ ဒီချစ်ခြင်းတွေ၊
အိမ်အပြင်မှာ ၀ါပင်တွေ ကိုယ်တိုင်စိုက်မယ်၊
ကိုယ်တိုင်ငင် ၀ါချည်မျှင် ဖျင်တဘက်ရယ် …။
အိမ်အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင်ထွန် ကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့
စပါးရိတ်ချိန် ၀ိုင်းဖွဲ့မယ် ဆန်အရက်ရယ် …။
ဒီအချိန်ဆို အိမ်ကပြင်မှာ ကဗျာတွေရွတ်မယ်။
လာပါကွယ် အိမ်အပြင်မှာ ဂစ်တာတီးမယ်။
ရင်ခွင်မှာ ကြင်နာသူချိုအနမ်းရယ် …။
ချစ်မိတ်ဆွေ စည်းချက်ညီ အတူတူက မယ် …။
ကမ္ဘာမြေမှာ အိမ်တစ်အိမ်ဆောက်ကြမယ်လေ …။
ကမ္ဘာမြေမှာ ညင်သာစွာစီးဆင်းဖို့လေ … ။
ရင်ခွင်မှာရှင်သန်ရာ ခိုမှီရာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ကမ္ဘာမြေမှာ တည်ဆောက်ကြမယ်
ဒဏ္ဍာရီရာဇ၀င်လို ၀ိညာဉ်အိမ် စိန်စီရာ ရတနာခြယ် သိင်္ဂါရီအိမ် …..။
တစ္ဆေတစ်ကောင် ဟန်ဆောင်သလို မာယာကင်းမဲ့
ကံစီရင် ယုံကြည်စွာ ကမ္ဘာမြေမှာ
ရဲရင့်လိုက်ချစ်တဲ့အိမ် တို့ဆောက်ကြမယ် ……..။
စာသား - နေထွန်း
သံစဉ် - ဓီရာမိုရ် &lt;di yar mo&gt;
သီချင်းနာမည်ကရယ်စရာ (http://www.mediafire.com/?d22xilo904t) တဲ့ဗျာ နားထောင်ကြည့်ကြပါဥိး တော်တော်ရီရတယ်.. ;D
05-15-2008, 09:30 PM
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ ...အဆိုတော်နာမည်တော့ မသိဘူးဗျ ..ခံစားနားဆင်ကြည့်ပါ ..
05-18-2008, 11:35 PM
နှုတ်မဆက်နဲ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ ကိုယ့်ကောင်မလေးက အဝေးကြီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် ဒီသီချင်းလေးနားထောင်ကြည့်.. ;D
05-18-2008, 11:38 PM
ထာဝစဉ်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ ကိုယ့်ကောင်မလေးကို လိမ်လို့..အဲလေ..ပို့ပေးလို့ရတာပေါ့..အဟဲ ;D (မိုက်တယ်နော် :P)
05-18-2008, 11:49 PM
အစားထိုးဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ နားထောင်ကြည့်ပေါ့ လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုလိုနဲ့.... :)
05-18-2008, 11:53 PM
ဒီသီချင်းလေးကတော့ အဟောင်းလေးပါ ဟေမာနေ၀င်းဆိုထားတာ နားထောင်လို့တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ..
သီချင်းနာမည်က သီချင်းလေးကိုချစ်တာလား တို့ကိုချစ်တာလား တဲ့..နားထောင်ကြည့်ပါ ကြားဖူးပြီးသားပဲ.. :)
05-18-2008, 11:56 PM
မမတို့ အတွက် အဟဲ သီချင်းနာမည်က ကိုကိုဘာလို့ မုန်းတာလဲတဲ့..... ;D
05-19-2008, 02:03 AM
သီချင်းနာမည်ကတော့ မလွမ်းပဲ တဲ့။
မိုးကိုမှ ချစ်ပါတယ် ...မိုးကိုမှ မြတ်နိုးပါတယ်ဆိုတဲ့ သူများအတွက် ...မိုးသီချင်းလေးတွေကို စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...အားလုံးကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .....
ကဲ ...ကြိုက်ရာကိုသာ ဒေါင်းဗျာ ....အကုန်ပေးထားတယ် ....ဟဲဟဲ...
မိုးရာသီထဲ - Lဆိုင်းဇီ (http://www.mediafire.com/?1y9ezujfmyx)
မိုးသည်းထဲမှာ ပုန်းရှောင်သူ - NGIIK (http://www.mediafire.com/?g0ymj0zcmyt)
ဒဏ်ရာမိုး - ဒီလေး (http://www.mediafire.com/?jlibwhn2w1f)
၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် (http://www.mediafire.com/?sdcvq94xs2g)
မေမြို့မိုး - စိုင်းထီးဆိုင် (http://www.mediafire.com/?cw2ucxwzjz0)
မိုးနဲ့အတူငိုနေမယ် - မေစံပယ်ညို (http://www.mediafire.com/?ijdmllenz1j)
မိုးည - ခရီးသွားငါးယောက် (http://www.mediafire.com/?kjxfzsctjnd)
မိုးသည်းထဲမှာ - ၀ိုင်ဝိုင်း (http://www.mediafire.com/?lzvjtu9yw89)
မိုးနဲ့မျက်ရည် - ရဲလေး (http://www.mediafire.com/?cxjdzoton2j)
မိုးပြေး - ခင်ဘုန်း (http://www.mediafire.com/?jdzd0hdxjcw)
အခါလွန်မိုး - ထူးအိမ်သင် (http://www.mediafire.com/?4fyznpsxjtg)
မိုးသည်းည- အဲလက်စ် (http://www.mediafire.com/?ld9mxn2s9me)
မိုးတိမ်ပြဇတ်- ထူးအိမ်သင် (http://www.mediafire.com/?d0ndawg3mtd)
မိုးစက်ပွင့်လေး - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် (http://www.mediafire.com/?ywjmjvmo3zf)
အလွမ်းမိုးစက်များ- အဲလက်စ် (http://www.mediafire.com/?1lgv3onpwtg)
မိုးသည်းညလေး - YoYo (http://www.mediafire.com/?xnajbdjnxyx)
အမှတ်တရ - သန္တာဦး (http://www.mediafire.com/?0d1lstntico)
မိုးသီချင်း - NO (http://www.mediafire.com/?jb0s0azw23y)
မိုး - ကျော်သူစိုး၊ Rဇာနည် (http://www.mediafire.com/?gdmi0qnfmqh)
မိုးစက်တင်လေ - လွှမ်းမိုး (http://www.mediafire.com/?ccyzkjy34be)
မိုး- ရင်ဂို (http://www.mediafire.com/?jbwu1j1dst9)
သိပ်ချစ်ရတဲ့ မိုး - စည်သူလွင် (http://www.mediafire.com/?csymsg1oont)
မေဦးမိုး - ရင်ဂို (http://www.mediafire.com/?wpekwnsttcn)
ဒီလိုမိုး - အဲလက်စ် (http://www.mediafire.com/?m05mjod1yna)
နှုတ်ဆက်တဲ့မိုး - အဲလက်စ် (http://www.mediafire.com/?wmqhjy1ieou)
ဇူလှိုင်မိုး - စည်သူလွင် (http://www.mediafire.com/?5onydj2zzmt)
အချစ်မိုး - ရင်ဂို (http://www.mediafire.com/?1zzfdxj9onz)
05-22-2008, 10:12 PM
မြန်မာသီချင်းကြိုက်သူများအတွက် သီချင်းစာသားတွေတော်တော်များများရှိတဲ့ ဆိုဒ်လေးတစ်ခုကိုညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
သိပြီးသားဆိုရင်တော့ ဆောရီးဗျာ ..ဒီဆိုဒ်က ကော့ဒ်တွေပါ ပါပါတယ် ..နောက်ဆိုဒ်တစ်ခုကို မေ့နေလို့ ..သိရင်ထပ်တင်ပေးပါ့မယ် ..
ဆွတ်ယူပါ ..စားသုံးပါ ...မျှဝေပါ ..
05-23-2008, 01:08 AM
Little ကောင်းမြတ်ရဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ..သီချင်းစာသားအတွက် ပုံလေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..သီချင်းတွေကိုနားထောင်ပြီး ဘ၀အမောတွေပြေနိုင်ကြပါစေ ။
05-23-2008, 08:57 PM
Big bag ရဲ့သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ...ခံစားနားဆင်ကြည့်ပါ ...ကောင်လေးကကောင်မလေးကိုချစ်လို့အလျော့ပေးရတဲ့အကြောင်းလေးရေးထားတာပါ ...
NG2K ဆိုထားတဲ့ အရာအားလုံး ဆိုတဲ့သီချင်းလေးပါ (http://www.mediafire.com/?21xgyzeb7ix)
05-24-2008, 09:35 PM
ဒီသီချင်းလေးလည်းတော်တော် ကောင်းပါတယ် ... မင်းမရှိတဲ့အခါ တဲ့သီချင်းနာမည်က ...ဆိုဒ်လည်းနည်းပါတယ် ..1.58 MB ပဲရှိပါတယ် .. ;D ;D ;D
05-25-2008, 10:10 AM
အိမ်မပြန်ချင်သေးဘူးဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ နားထောင်ကြည့်ပါ...ဘယ်သူဆိုလည်းတော့ သိဘူးဗျ
05-25-2008, 08:55 PM
ကိုဟိန်းရေ အဲ့သီချင်းကို ဆိုထားတာက အဲလက်စ် ပါ ...ကျွန်တော် 10 တန်းတုန်းက အဲလက်စ် ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးသီချင်းဖြစ်တဲ့
05-26-2008, 01:09 AM
ကိုဘိုသူရေ အဲဒီသီချင်းလေးလိုချင်နေတာ ကြာပြီဗျို့  တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပဲဗျာ ဂီတာတီးပြီး အရမ်းဆိုလို့ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးပါပဲ..
သီချင်းကောင်းလေးတွေ ရှိရင်လည်း ထပ်တင်ပေးပါဥိးခင်ဗျာ...
05-26-2008, 07:41 PM
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဇော်ဝင်းရှိန် ရဲ့ ပိုင်ရှင် ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
အခုသီချင်းကတော့ ရင်ဂို ပြန်ဆိုထားတာပါ ... Version အသစ်ပေါ့ ...Intro လေးကတော်တော်ကောင်းပါတယ် ...ဇော်ဝင်းရှိန် ဆိုထားတာကိုရှာမတွေ့လို့
ရင်ဂို ဆိုထားတာကိုပဲ တင်ပေးလိုက်ရတာပါ ...
အဲလက်စ် ရဲ့ သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ကို ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...အချစ် နဲ့ အရှုံး ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ ...
သီချင်းတွေကို နားဆင်ပြီးဘ၀အမောတွေပြေနိုင်ကြပါစေ ။
05-29-2008, 03:40 AM
ူ ချစ်တဲ့တောင်ပေါ်သူ (http://www.mediafire.com/?j0x2czfedts) ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ......
05-29-2008, 07:30 PM
မင်းတစ်ယောက်သာ (http://www.mediafire.com/?9ovt4hmom3m)ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ....
ဘိုဘိုရဲ့ သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...ပုံမှန်ရှင်သန်ခွင့်ဆိုတဲ့သီချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်...
ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့တော်တော်ကောင်းပါတယ် ..Mediafire ကပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..ဒီကောင်က Upload တင်ရတာမြန်လို့ပါ ..
Internet explorer (or) Firefox နဲ့ တိုက်ရိုက်ချရင် 100% အပြည့်ရပါတယ် ..
05-31-2008, 03:38 AM
ဲ ကိုယ်ဘယ်လိုနေရမလဲ (http://www.mediafire.com/?1bxtggjybsz) ဆိုတဲ့ သီချင်းအေးအေးလေးပါ...နားထောင်ကြည့်ပါဥိးနော်
ရွှေထိုက်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ နားထောင်ကြည့်နော်..
ဟန်ထွန်းဆိုထားတဲ့ ရင်ခုန်သံဘက်သို့ တမ်းချင်း (http://www.mediafire.com/?jvdb10zc8xg)ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ
ဟာသသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..မိန်းမကြောက်ရတဲ့သူများအတွက်ရေးထားတာပါ ;D ;D..သီချင်းလေးက အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ် ..
06-04-2008, 09:11 PM
မြန်မာသီချင်းတွေအတွက် Lyrics တွေတော်တော် များများရှိတဲ့ ဆိုဒ်လေး ၂ ခု ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..သိပြီးသားဆိုရင်တော့ ဆောရီးဗျာ ..
ဆွတ်ယူပါ . စားသုံးပါ .မျှဝေပါ။
06-06-2008, 11:12 PM
ထူးအိမ်သင်ဆိုထားတဲ့ မေ့လိုက်တော့ ဆိုတဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးပါ..ကောင်းလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
မတစ်ယောက်တည်းပါဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ ဂီတာတစ်ခုတည်း တီးပြီးဆိုထားတာပါ...ကောင်းလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
06-28-2008, 04:34 AM
၆။နေ့ မအိပ်ညမအိပ်-ရသ (http://www.mediafire.com/?zxx0tyzaoq3)
၇။ကိုယ်တွေ့ မှတ်တမ်း-ချစ်ကောင်း (http://www.mediafire.com/?wu14m01vfuj)
၈။အစမ်းသပ်ခံ အသည်းနှလုံး-ဇော်ဝင်းထွဋ် (http://www.mediafire.com/?stuyfwy0zm0)
၉။အကြင်နာအကြည့်တွေရဲ့ အကြောင်း-ဇော်ပိုင် (http://www.mediafire.com/?h0m3vnsj3mw)
၁၀။Yes or No-မင်းမော်ကွန်း (http://www.mediafire.com/?5v9v3e4drvj)
07-02-2008, 02:19 AM
ကိုင်ဇာနဲ့ မေဆွိ ဆိုထားတဲ့ *အနမ်းပန်း*
အဲးဒီသီချင်းလေး လိုချင်လို့ပါ ၊ ကူညီကြပါအုန်း
ကိုစတိုင်ကျကျကောင်လေးရေ တစ်ပုဒ်ချင်းထုတ်လို့ မရလို့ စီးတီး တစ်ခွေလုံး ကျနော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ;D
နံပါတ် ၆ မှာ အနမ်းပန်းပါ..ဒေါင်းကြည့်ဦးအစ်ကိုရေ အဆင်မပြေရင်ပြန်ပြောပါ ခင်ဗျာ.....
သီချင်းကောင်းလေး ၂ ပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...ဘ၀အမောတွေပြေကြပါစေ ....
ဒါကတော့ feel လဲမဟုတ် ဘာလဲမဟုတ် သိဘူး
နားထောင်ရင်တော့ ကြိုက်မှာပါ မကြိုက်တောင်
နေကောင်းလား ( ကြိုဖားထားတာ)
zshare က ဟာတွေက Not found တဲ့
လိုချင်ပါတယ် ဆိုမှ :(
အစ်မဘယ်သီချင်းတွေ ဒေါင်းလို့မရတာလည်း ကျနော်တင်တာတော့ zshare နဲ့ပါဝူးနော်.
ကျနော်တင်ထားတဲ့ သီချင်းတွေ ဒေါင်းလို့အဆင်မပြေရင် ပြောပါအစ်မ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်..
zshare နဲ့တင်ထားတဲ့ သီချင်းတွေတော့ ကျနော်လည်း မဒေါင်းလိုက်ရလို့ စက်ထဲမှာ မရှိဘူးအစ်မ..
ရှိတဲ့သူတွေ ပြန်တင်ပေးပါလိမ့်မယ် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ wait နော် ဟီးး ;D
08-26-2008, 05:15 AM
I would like to share one of my favourite songs here...the singer is L Sai Zi and the title is &quot; Tate tate lay bel chit thwa mel&quot;......
Enjoy..... ;) 8) 8) 8) :P 8) 8) 8) ;)
ဒူမှ တင်ကြဘူးလား တင်ကြပါဦးကွယ်
တစ်ယောက်မှ မတင်ရင် မိုးပြေးလေး တင်မှာနော်
မိုးပြေးလေးရဲ့ ပေါက်ကရ သီချင်းများ
ကောင်းကောင်းတောင်းနေ တာ ပေးမှာလား မပေးဘူးလား
လေးဖြူ ရဲ့ သီချင်းအသစ် ပါ၊ နောက်ထွက်မယ့် အခွေမှာပါလာလိမ့်မယ် ....
ဒါက youtube link ပါ ...
09-22-2008, 02:05 AM
ရိုးသားကြိုးစားတောင်ပေါ်သားတဲ့(ကျွန်တော်ဟုတ်ဘူး) ;D ;D
10-16-2008, 10:14 PM
အေးတော့အေးပါတယ် ဘယ်မှတင်ရမှန် မသိလို့
10-20-2008, 07:32 PM
ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွတ်တယ် ဆိုတဲ့ စီးရီးခေါင်းစဉ် သီးချင်းကို
Vocal - Rဇာနည်
ရေးသူ - Rခိုင်
သရုပ်ဆောင် - Rဇာနည်၊ ဇေယျ၊ မိုးဟေကို
ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွတ်တယ် (http://ifile.it/0fhje6t)
11-02-2008, 08:58 PM
12-30-2008, 10:39 AM
ခွင့်မတောင်းပေမယ့် ရပါတယ် .. .. .. တဲ့
(စိုင်းထီးဆိုင် ဆိုတာကိုကြိုက်ပါတယ်၊ ရှာမရတော့လဲ ရှိတာပဲ အရင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်)
ခွင့်ပြုတယ်၊ ခွင့်လွှတ်တယ် .. .. .. တဲ့ :) :)
12-30-2008, 10:52 AM
ဟိန်းလေးကတော့ ခွင့်မတောင်းလို့ လဲမရဘူး &gt;:(
ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ် လို့ပြောတာက အာဇာနည်
&gt;:( အဆိပ်ခတ်မယ် ရိုက်သတ်မယ် လို့ပြောမှာကတော့ ဟိန်းလေးပဲ ;D
12-30-2008, 11:22 AM
အခု အာဇာနည် က နောက်ဆုံးရင်ခွင်လို့ ပြောပါတယ် :P :P
12-30-2008, 01:49 PM
နင်ငါနဲ့ ဝေးပြီးမနေနိုင်ဘူးဆို..ငါတစ်ယောက်ထဲပဲ သိပ်ချစ်တယ်ဆို..ခုတော့လည်းလေ......
ရိုမီယို.ဂျူးလိယက် မမှီနိုင်ဘူးဆို..အာဒံဧဝ ထက် တို့ ချစ်မယ်ဆို ခုတော့လည်းလေ..........
ပုံပြင်တွေပြောပြီးထားခဲ့ခြင်းခံရတဲ့သူများ စိတ်ဝင်စားရင် :P :P
12-31-2008, 03:32 PM
mediafire ပိတ်ထားတယ် :( အဲဒိဆိုက်ကိုပိတ်ထားဒယ် :(
အကိုပါပါကြီး ပြန်တင်ပေးပါ :( :( :(
ငါတို့ ဝေးသွားရင် .......... ပြန်မဆုံဖြစ်ကြရင်..
မင်းနှလုံးသားမှာ အမြဲတမ်းရှိပါစေ.......ဆိုတဲ့ ...Vနိုထွန်း
12-31-2008, 06:26 PM
သူတင်ပေးထားတာကိုပဲ ifile ပြောင်းတင်ပေးလိုက်တာပါ၊ မရသေးရင်ပြန်ပြောပေါ့ဗျာ။
Ta La Non
ဒီသီချင်း ကတော့ L လွန်းဝါ နဲ့ L ဆိုင်းဇီ တို့ ရဲ့ပင်စင်ယူပါအုံး ကြိုက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
02-05-2009, 03:50 PM
သီးသန့် ဖြစ်တည်မှု က L ဆိုင်းဇီ ရဲ . song ပါပဲ
ကောင်မလေး တွေ ကြိုက်ကြမယ် လို့ထင်ပါတယ်....
နောက်ဆုံး ထွက်တဲ့ song ပါ..........
သီးသန့် ဖြစ်တည်မှုကိုဒေါင်းပါ (http://www.mediafire.com/?jgjidimzums)
02-06-2009, 11:36 AM
mail ပြန်စစ်ရင်း ဒီသီချင်းလေးကိုပြန်တွေ့တာပါ၊
မမိုးပြေးလေး အမြဲပြောပြောနေလို့ သူ့အတွက်တင်ပေးထားလိုက်ပါမယ် http://i44.tinypic.com/ery5w7.jpg
( ရန်စ ရုံသက်သက်ပါ၊ ရန်ကုန်ပြန်လာရင် ချမယ်ရိုက်မယ်နှက်မယ် ပဲပြောပြောနေလို့ http://i44.tinypic.com/s1003p.gif)
02-06-2009, 01:47 PM
ဘယ်သူက share ခိုင်းလို့လဲ
လုပ်ပေါ့ ခုတော့ တွေ့မယ် မြန်မာပြန်လာရင်
http://www.myanmarengineer.org/forum/chat/img/emoticons/51.gifhttp://www.myanmarengineer.org/forum/chat/img/emoticons/59.gifhttp://www.myanmarengineer.org/forum/chat/img/emoticons/68.gifhttp://www.myanmarengineer.org/forum/chat/img/emoticons/81.gifhttp://www.myanmarengineer.org/forum/chat/img/emoticons/56.gif http://www.myanmarengineer.org/forum/chat/img/emoticons/52.gif http://www.myanmarengineer.org/forum/chat/img/emoticons/57.gif
;D လူချစ်လူခင်ပေါများအောင်လုပ် နည်းဆိုပြီးခေါင်းစဉ်သစ်တောင်ရေးလို့ရနိုင်လောက်ပြီ :P :P :P
down လို့လဲရ၀ူးနော် :(
02-14-2009, 10:20 AM
http://www.yewintthu.co.cc ဆိုတဲ့ ဘလော့လေးကို မျက်စိလည်ေ၇ာက်သွားပြီး ဒီသီချင်းလေးတွေ့ပြီး သဘောကျလို့ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ..လူလည်အာရှသား..တဲ့ သီချင်းနာမည်က..
တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်..အဆိုတော် အရိုးဆိုထားတာပါ..
နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတဲ့ ကောင်လေး၊ကောင်မလေးများ ကြိုက်ကြမှာပါဗျာ..
ချစ်သူများနဲ့ခွဲနေသူများအနေနဲ့လည်း သီချင်းထဲကလိုတော့ မဖြစ်ကြစေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ..
ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း what so ever ပေါ့ဗျာ... ;D ;D ;D
(တချို့လူတွေကို)၂ အားကျပြီး ရှိစုမဲ့စုတွေရောင်းချပြီး
လေယာဉ်ပျံပေါ်တက်နှုတ်ဆက်တော့ ကျွန်တော် ခန့်ခန့်ကြီးဗျ
ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲ ဖောရင်းသွားပြီ ဖလိုက်အသစ်ကြီးနဲ့ဗျ
တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာ မိုးတိမ်ထဲ ပြတင်းပေါက်ကချောင်း
(မိုးပျံနေတဲ့)၂ တိုက်တွေကြား နည်းနည်း ရင်းနှီးတဲ့မျက်နှာများ
ချင်ဗျားတို့သုံးတတ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်
Chorus: ဘကုန်းလား ယပလက်လား ဖဦထုတ် ဂငယ်လား ဒါမှမဟုတ် အ ပဲလား၊ မပဲလား
လူကုံထံ ရွှေတွေတဲ့လား၊ ဘယ်သူဘာဖြစ်ဖြစ် အလုပ်အတူသွား နေ၀င်မီးပိတ်
ပုရွက်ဆိတ်များ၊ အရုဏ်တက်တိုင်းထ မနက်တိုင်းတက်ကြွလူလည်အာရှသား
(မနက်ဆိုမြည်မယ်)၂ Alarm နာရီ ရည်းစားမှ ဖြောင့်အောင်မလွမ်းနိုင်မီ
အရောင်စုံလူတွေကြားထဲ တိုးရဦးမယ် အလုပ်နောက်မကျမီ
(အားရင်ထိုင်ရေး)၂ စာမျက်နှာတွေ ဖုန်းခဈေးကြီးလို့ မဆက်နိုင်သရွေ့
အဝေးကဦးချကြ ရွှေတိဂုံမြေ ပြန်မရောက်သေးသရွေ့တော့
Chorus: ဘာဖြစ်ဖြစ်သတိသာထား ငါတို့ရည်းစား သူများနဲ့ညား
အသေသာမှတ်စွဲထား What so ever ပျော်အောင်သာနေကြ
မဟာလူတန်းစား အိပ်မက်များ၊ အိမ်ပြန်အခန်းပိတ် ကျိတ်ငိုကြ အရုဏ်တက်တိုင်းထ
မနက်တိုင်း တက်ကြွ လူလည် အာရှသား
03-19-2009, 11:29 AM
လမ်းမခွဲကြေး (http://www.sendspace.com/file/9aascu) :P
03-25-2009, 02:11 PM
...တခါတရံမြင်နိုင်လိမ့်မယ် ..အဖြူရောင်အကျီအောက်မှာ.. နာကျင်ညစ်ထေးစွန်းပေသော
ဘ၀ တခုရှိနေတယ် ..
ဆိုတဲ့ .. စာသားလေးပါတဲ့ ထူးအိမ်သင်ရဲ့
http://i40.tinypic.com/1z5sswl.gifလူနဲ့အကျီ (http://ifile.it/vha50rj)
ဘယ်အခွေကမှန်းမသိတဲ့ မျိုးကြီးရဲ့ simple pleasures of life ပါ
တင်ထားတာမှားနေတယ်ဆိုရင် sorry နော် :P :P :P
တခါမှမတင်ဖူးလို့ပါ ;D ;D ;DDownload link: http://www.megaupload.com/?d=NAO41W7G
03-27-2009, 03:09 PM
နောက်တနေရာ ;D ;D
03-31-2009, 07:55 AM
ရင်မှာ အမြဲတမ်းမင်းရှိတယ် :( ဆိုတဲ့ ဆုန်သင်းပါရ် ..ရဲ့
ဘယ်လောက်ပဲ ရက်လ နှစ်ရှည်ကြာ
ဖြတ်မရတဲ့ အချစ်နဲ့ ချစ်နေဆဲ
အိုး ... လွမ်းနေဆဲ
အကြိုက်ချင်းတူရင် ခံစားလို့ရအောင် share လိုက်ပါတယ်
သီချင်းအေးအေးလေးပါ ယောက်ျားလေးဆိုတာပဲ ဘယ်ဒူလဲသိဝူး ;D
အောင်ရင် ရဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့သီချင်းတွေထဲက တပုဒ်ပါ။
အခုတော့ အောင်ရင် ဆိုထားတာရှာမတွေ့လို့ ရှိတာလေ share လိုက်ပါတယ် :D
http://i43.tinypic.com/2rdj6ky.gif မုန်းမေ့ဖို့မလွယ် (http://ifile.it/3pw8r0n)
04-17-2009, 02:58 PM
အဆိုတော် အယ်နောင်း ဖြစ်ပါတယ်။သီချင်းခေါင်းစဉ်တော့မသိသေးပါဘူး ;D ;D
04-17-2009, 10:25 PM
ရိုမီယို.ဂျူးလိယက် မမှီနိုင်ဘူးဆို..အာဒံဧဝ ထက် တို့ ချစ်မယ်ဆို ခုတော့လည်းလေ.......
အစ်မရေ link က expire ဖြစ်နေပြီတဲ့။ကူပါဦး။
ရိုမီယို.ဂျူးလိယက် မမှီနိုင်ဘူးဆို..အာဒံဧဝ ထက် တို့ ချစ်မယ်ဆို ခုတော့လည်းလေ....... ဆိုတာလေး
မရရင် ပြောပါ sendspace က တင်ပေးရတာဆိုတော့ ;D ;D
04-26-2009, 09:42 AM
ko bothu ရေ...
ဒီသီချင်းလေးလည်းတော်တော် ကောင်းပါတယ် ... မင်းမရှိတဲ့အခါ တဲ့သီချင်းနာမည်က ...ဆိုဒ်လည်းနည်းပါတယ် ..1.58 MB ပဲရှိပါတယ် .. ဟဲဟဲ ဟဲဟဲ ဟဲဟဲ
တင်ပေးထားတဲ့ဟာ တွေက file not found ဖြစ်နေတယ်ဗျ ....ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ifile ကနေပဲပြန်တင်ပေးပါလား
နှုတ်မဆက်နဲ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ ကိုယ့်ကောင်မလေးက အဝေးကြီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် ဒီသီချင်းလေးနားထောင်ကြည့်.. ဟဲဟဲ
အစားထိုးဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ နားထောင်ကြည့်ပေါ့ လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုလိုနဲ့.... အပြုံးသင်္ကေတ
ကိုယ်ဘယ်လိုနေရမလဲ ဆိုတဲ့ သီချင်းအေးအေးလေးပါ...နားထောင်ကြည့်ပါဥိးနော်
အဲဒီသီချင်းတွေက mediafire ဖြစ်နေလို့ဗျ ဒေါင်းလို့မရဘူး.........မြန်ထဲက သုံးတာမို့ ပိတ်ထားတယ်.................အကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ifile ကနေပဲ ကျေးဇူးပြုပြီးပြန်တင်ပေးပါလားဗျာ.........
04-30-2009, 11:59 AM
ကျနော် ဒီ ၁ ရက် ၂ ရက် အတွင်းနားထောင်နေတဲ့ သီချင်းပါ ..
ကျနော်နဲ့တော့ ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူး ကြိုက်လို့ သူငယ်ချင်းတယောက်ပေးထားတာ ..
မမ ရှိတဲ့ မောင်မောင် များတွက်တော့ အဆင်ပြေမယ် ထင်တာပဲ ..
N Zai ရဲ့ ၀ါဆို
အဆိုတော်ကတော့ Shayne Ward ပါ။ သူရဲ့ Second Album ( Breathless) ။
UNTIL U (http://ifile.it/cxpmyo2)
Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Throught any kind of weather
I dont wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Dont wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me i will do whatever
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you
Baby it just took one hit of you now I&#039;m addicted
You never know what&#039;s missing
Till you get everything you need,yeah
I don&#039;t wanna run away
Don&#039;t wanna make it worse
Baby tell me,I&#039;ll do whatever
Baby,nobody,nobody until you
See it was enough to no
If I ever let you go
I would be no one
Cos I never thought I&#039;d feel
All the things you made me feel
Wasn&#039;t looking for someone until you
[Chorus repeat twice]
Nobody, nobody, until you
If our love wasafairytale
To an island where we&#039;d say I do
It&#039;d be so beautiful if that came true
You don&#039;t even know how very special you are
You&#039;re everything good in my life
I still can&#039;t believe that you&#039;re mine
So beautiful you&#039;re leaving me
How I&#039;m thankful for the life we&#039;ve made
You&#039;re like an angel
You&#039;re something special
I only hope that I&#039;ll one day deserve what you&#039;ve given me
***upload တင်ပေးတဲ့ ကိုမောင်စော ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်***
05-02-2009, 12:14 PM
ဒီသီချင်းလေးက အဆိုတော် လုလု ဆိုထားတဲ့ ချစ်သူ့ကဗျာ သီချင်းလေးပါ ... ကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် .....
05-02-2009, 12:31 PM
Listen to your heart လို့အမည်ရပါတယ်၊ လိုက်ဆိုနိုင်အောင်လို့ စာသားလေးပါတင်ပေးထားပါတယ်
ဒီမှာ နားဆင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် (http://www.sendspace.com/file/nhgxtp)
I know theres something in the wake of your smile
I get an ocean from the look in your eyes, yeah
You&#039;ve been to love but that love falls apart
A little piece of heaven turns to dark
Listen to your heart when he&#039;s calling for you
There&#039;s nothing else you can do
I don&#039;t know where your going, and I don&#039;t know why
Sometimes you wonder if this fight is whats ???
The precious moments arealost in the time, yeah
There swept away and nothing is what it seems
The feeling of your loving to your dreams
And there are voices, that want to be heard
So much to mention but you cant find the words
The scence of logic the beauty thats been
When love was wilder then the wind
I don&#039;t know where your going and I don&#039;t know why
05-02-2009, 12:42 PM
ကျွန်တော်က သီချင်းအေးအေးလေးတွေကြိုက်တာမို့ ကိုယ်ကြိုက်တာတွေပဲ ရွေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..... လိုချင်တဲ့သီချင်းလေးတွေများရှိရင် တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော့်မှာရှိရင် တင်ပေးပါ့မယ် ..... အခုသီချင်းလေးကတော့ နေညိုရင် လို့အမည်ရပါတယ်
ဒီမှာ နားဆင်နိုင်ပါတယ် (http://www.sendspace.com/file/v2pzf2)
05-07-2009, 08:33 AM
သီချင်းလေးနာမည်က မိန်းကလေး တဲ့ နားထောင်ကြည့်ကြပါဦး...သီချင်းလေးက တော်တော်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ.ဂစ်တာ တစ်လက်တည်းနဲ့ တီးထားတာဗျ.......
05-08-2009, 10:39 AM
သီချင်းအေးအေးလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ .... ကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် .. သီချင်းခေါင်းစဉ်က အပြစ်မမြင်
ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် (http://www.sendspace.com/file/kianug)
ဒီတစ်ပုဒ်ကတော့ နေညိုရင် ဆိုတဲ့သီချင်းလေးပါ ...
ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် (http://www.sendspace.com/file/0l71cs)
အခုတစ်ပုဒ်ကိုတော့ ပြည်ပရောက်သူငယ်ချင်းတွေ ကြိုက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ....
ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် (http://www.sendspace.com/file/mji0ps)
05-09-2009, 06:50 PM
ကျွန်တော့်ရဲ့ပုံစံအတိုင်း သီချင်းအေးအေးလေးတွေပါပဲ ....
05-10-2009, 07:06 AM
05-10-2009, 08:25 AM
ဦးဝင်းဦး..သီချင်းမှန်သမျှကို လိုချင်တာလားခင်ဗျ.. ဘာသီချင်းလည်းဆိုတာ.. မဖော်ပြထားတော့
ကျနော် ညွှန်းထားတဲ့ အတိုင်းသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ... ကျနော်အမြဲသုံးနေတဲ့ ဆိုဒ်ကလေးပါ..
လိုချင်တဲ့သီချင်း.. အဟောင်းအသစ်..အကုန်နီးပါး.. ရှိပါတယ်...
05-10-2009, 09:19 AM
05-11-2009, 02:29 PM
အသဲက ကွဲနေတော့ ခံစားချက်သီချင်းတွေပဲ လောလောဆယ်တင်အုံးမယ် ;D
ပြော ...ငါ့ကိုမုန်းတယ်ဆိုလဲပြော..ငါ့ကိုမချစ်ချင်တော့ရင်ပြော...အရာရာဟာမင်းအတွက် နောက်မကျသေးဘူး
ပြော....မင်းရင်ထဲက အမှန်အတိုင်းပြော..ငါ့ကိုစိတ်ကုန်နေလည်းပြော...မင်းနဲ့ငါ့ရဲ့ အချစ်က ဒီတင်ပြီးပြီပေါ့..မင်းဆန္ဒ တခုအတွက်..ငါအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်......
ဒီသီချင်းလေး စပြီးထွက်လာတော့ ဘာရယ်လို့မဟုတ်ဘူး ကြိုက်မိသွားတာပါ
နမိတ်နောက်နမာလိုက်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးလားတော့မသိဘူး ..
ခု တဖန်ကြိုက်မိသွားတာကတော့ တိုက်ဆိုင်လို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပေါ့ ....
ငွေစန္ဒာဆီကို ရောက်ဖို့ စင်ယော်ငယ်တောင်ပံဖျန့်လို့....
05-12-2009, 06:49 PM
ဒီသီချင်းလေးက အမေများနေ့ကိုဂုဏ်ပြုရင်းနဲ့ ဒီဖိုရမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ အစ်မ၊ ညီမများကို ရည်ရွယ်ပါတယ် .... ကြိုက်ကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ် .... လ္ဘက်ခူးတဲ့အမေ လို့အမည်ရပါတယ် ... အဆိုတော်က မီးမီးခဲပါ ...
VCD Link (http://www.sendspace.com/file/oks91p)
MP-3 Link (http://www.sendspace.com/file/1hglei)
05-13-2009, 05:14 PM
မျိုးကြီးရဲ့.......အမေ http://www.zshare.net/audio/59954539d0a79368/[/color]]http://www.zshare.net/audio/59954539d0a79368/ (http://[color=green)
05-14-2009, 12:00 PM
ဟိန်းလေးနဲ့ ဝေးရာအရပ်ကို တခဏခွဲခွာသွားခဲ့ရမဲ့အချိန်ရောက်ရင်
ခုတော့ ..ပို့ပေးဖို့မလိုလောက်တော့ပါဘူးလေ.... :( :(
05-14-2009, 12:34 PM
မင်းအတွက် ငါ့မှာအချိန်နဲ့အမျှ အသက်ထွက်လု ငါခံစားရ...
တစ်ဘ၀ထက် တစ်ယောက်ရည်ရွယ်ခဲ့တာ ခုတော့ ငါးပါးမှောက်တာ
....................... ဘာထူးလဲ အခု ငါ...ဘာထူးလဲ အခုငါ အရင်တိုင်းသာ..ရင်ကွဲပက်လက်ကျန်ခဲ့တာ....
05-14-2009, 01:53 PM
အကို တာယာ မိုးသီချင်းအကုန်သေချာလားဟင် :P
ကျွန်တော်က ဟဲလေးရဲ့ ပက်သက်ခွင့်ပြုပါ သီချင်းကိုလိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ....
06-15-2009, 10:22 PM
ရော့ ဒီမှာ (http://www.sendspace.com/file/oe0j5i) ယူလိုက် ;D
ဘာမှန်းမသိဘူး ဒီသီချင်းလေးကို စိတ်ထဲက အမြဲညည်း နေမိတယ်...
06-20-2009, 12:36 PM
ခမ်းနားခြင်းကင်းမဲ့တဲ့အရိုးသားဆုံးခရီးတစ်ခု ကိုသာ တစ်ကယ်လျှောက်လှမ်းချင်ခဲ့ တာပါချစ်သူရယ်
ကိုညီထွဋ် ရဲ့.. ရင်သန်ခြင်းများမှ..
ပျော်ရွှင်ပါစေ ..အိုး.. သမီးလေးရေ (http://www.mediafire.com/?zjlmzlntzmt)
( မှတ်ချက်= ဒီသီချင်းယူသော သမီးရှိတဲ့ အဖေများအား.... ကြိုတင် ယောက္ခမ တော်လျက် .. ကျောက်ပျဉ်ထမ်းပြီး နက်ပေါ်တင်လိုက်ပါကြောင်း ;D )
မရေးပေးဘူးသာဆိုတယ် တစ်ပုဒ်လုံးနီးပါးပါပဲ ;D ;D
စာသားလေးတွေက ကောင်းတော့ သတိထားမိအောင်ပါ
အချစ်က အကြီးမားဆုံး နေရာယူထားတော့
ငါဟာ ရိုးသားစွာ နမ်းရှိုက်ခဲ့ပြီ အပိုတွေငါမပြောတတ်
မင်းဘေးက ချစ်သူထက် ငါဟာအဖြူသက်သက်
ဒီအချိန်မှာ အစမ်းသတ်ခံ ငါ့ရဲ့အသဲကို နင်လေချန်လွန်းခဲ့
မင်းအတွက် အမှတ်တမဲ့များက ဒီမှာ တဘ၀လုံးအတွက်
ပုံကာ င့ါရဲ့မေတ္တာငါ့ရဲ့သစ္စာ ရင်ခွင်ဟာ ဟက်တက်
ငါအသက်ရှင်စွာအမြဲရှိနေသရွှေ့ ခွင့်လွှတ်တယ် ....
အဖြူသက်သက်ကို ဒီကနေနားထောင်ရအောင်လေ (http://www.sendspace.com/file/6emglh)
06-23-2009, 02:45 PM
မချစ်ပဲ မနေနိုင်အောင် မင်းရဲ့အပြုံးတွေ
နှလုံးသားဒဏ်ရာ တွေ မင်းမပေးဘဲနဲ့
06-23-2009, 10:57 PM
06-23-2009, 11:20 PM
တစ်ကယ်လို့ ကိုယ်တို့ ဝေးခဲ့ ကြရင်တောင်......တစ်ရက်ပဲငိုပါ ချစ်သူရယ်
အဆိုတော် ဟန်ထွန်း တင်ဇာမော်
တို့တည်ဆောက်မယ့် အိမ်လေးရယ် လေမုန်တိုင်းနဲ့နှင်းတွေထဲ
လဲသွားမှာစိုးထိတ်ခဲ့ အတူတူ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲ
ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလဲမသွားမယ့် အချစ်တွေ
ဒီရင်မှာ တို့နှစ်ယောက် ရှိနေလည်း
ကံကြမ္မာရဲ့ လှည့်ကွက်များ မာယာများအလယ်မှာ
အချိန်တွေတိုင်း တို့ဆုတောင်းနေတယ် မပြိုပါနဲ့အချစ်အိမ်လေး
တို့ဘ၀ပေးဆပ်ခဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အချစ်သစ္စာနဲ့
သံစဉ်တွေ လှပလွန်းတဲ့ သီချင်းရယ်
ကျွန်မ ကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးပါ :P http://www.sendspace.com/file/yvgu3x
06-28-2009, 05:07 AM
ဒီသီချင်းလေးကတော့ NG2K အဖွဲ့မှ ဇင်မင်းခန့် ပါဝင် သီဆိုထားတဲ့ မထွက်ရသေးသော သီချင်းလို့ ပြောပါတယ်...။
အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းပါ ခင်ဗျာ..။
ဒီ တပုဒ်ကတော့ ဘယ်သူဆိုတာလဲ မသိဘူး..။ အရမ်းကောင်းပါတယ်... ဝေးကွာနေတဲ့ ချစ်သူများ အတွက် နှစ်သိမ့်လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာ သီချင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်...။ သီချင်းလေး နားထောင်ပြီး မျက်ရည်တွေ မဝဲနဲ့နော်....။ ဟဲဟဲ...။
အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ...။ မသိသေးတာ မတတ်သေးတာရှိရင် သင်ပြပေးပါ...။
06-28-2009, 06:16 AM
ဒီသီချင်းလေးကတော့ အဆုံးမဲ့အချစ် လို့ အမည်ရပါတယ်...။ အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်...။ နားထောင်ခံစားကြည့်ပါ...။ ဆိုတဲ့သူကတော့ အယ်လ်လွန်းဝါ နဲ့ အမျိုးသမီး အဆိုရှင်တော့ မသိပါဘူး..။ အောက်မှာ ဒေါင်းပေးပါ...။
ဒီသီချင်းလေးကတော့ နိုင်ငံခြားမှာ တာဝန်သွားထမ်းဆောင်တဲ့ ချစ်သူအတွက် သီဆိုထားတဲ့ အန်တီနွဲ့ရည်ဝင်းရဲ့ သီချင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်...။ အဟောင်းလေးပါပဲ ပြန်လည်ခံစားကြည့်ပါ....။ ခံစားချက်တွေတိုက်ဆိုင်သွားရင် ခွင့်လွတ်ပါ...။
အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ...။ မသိသေးတာ မတတ်သေးတာရှိရင်လဲ သင်ပြပေးပါ...။
06-29-2009, 08:59 AM
တစ်ခါတစ်လေများ လို့ အမည်ရပါတယ်။
တေးဆို သစ္စာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ရည်တောင် နဲနဲ ၀ဲသွားတယ် ... super tragedy song ပဲကွာ.. :&#039;( :&#039;(
ဟစ်ဟော့ အဆိုတော် အက်ဆစ် အဖွဲ့မှ ဟိန်ဇော်ရဲ့ နောက်ဆုံးတကိုယ်တော် စီးရီးဖြစ်ပါတယ်..။ စီရီးနံမည်ကတော့ ဘယ်သွားသွားဘာလုပ်လုပ် ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီမှာ ဒေါင်းပါ (http://ifile.it/73b6uwa)
ပက်စ်ဝေါ့ မမေ့နဲ့နော်....။ WWW.Myanmarengineer.Org
အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ..။ မသိသေးတာ မတတ်သေးတာရှိရင်သင်ပြပေးပါ...။
07-01-2009, 09:53 AM
အန်ဆိုင်းလီ ရဲ့ သီချင်း- ကျေးဇူးပဲသူငယ်ချင်း
07-01-2009, 10:43 AM
ရတနာပုံ ရတနာပုံ ရတနာပုံ .....စည်း..စိမ်..တွေ..ရစ်ဝိုင်းလို့ ..ရစ် သိုင်း ကာ ခြုံ.....
တေးဆို - မြန်မာပြည်သိန်းတန်
ဒေါင်းလုပ် - http://ifile.it/vno8wh5
07-02-2009, 04:01 AM
ဘောလုံးဝါသနာရှင် ပရိသတ်များ အတွက်.....။
ရတနာပုံ အက်ဖ်စီ အသင်း ရဲ့ သီချင်းလေးပါ....။ ရတနာပုံ အက်ဖ်စီ Fan တွေ အတွက် သီချင်းလေးပါ...။
“လာပြီလေ ဆွဲပြီး ..ဆွဲပြီ ကစ်ပြီဟေး... ရတပုံအက်ဖ်စီ ဆွဲပြီ ကစ်ပြီဟေး....။ ”
07-18-2009, 05:28 PM
အဝေးက ချစ်သူတွေ အတွက် သီချင်းလေး တပုဒ်ပါ ...။ NGIIK မှ ဇင်မင်းခန့် ပါဝင်သီဆို ထားပါတယ်..။ သီချင်းလေးက ကောင်းပါတယ်..။ နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ...။
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းအေးအေးလေးတွေ ပါ..။ ခံစားချက် သီချင်းလေးတွေပါခင်ဗျာ...။ ::) ::) ::) ::) ::) ::)
ဒီမှာ (http://ifile.it/t67095b) ဒေါင်းလိုက်ပါ
07-18-2009, 07:18 PM
password တောင်းနေတယ်ဗျ ....
07-19-2009, 08:00 PM
password ပြောဖို့မေ့သွားတယ်..။ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ..။ ;D ;D ;D ;D ;D ;D
password က WWW.Myanmarengineer.Org ပါခင်ဗျာ..။
07-27-2009, 04:00 PM
ငါ ငိုနေပါတယ် ဒါကိုမင်းသိစေတော့
လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုလို....... :(
07-30-2009, 04:57 PM
ဆောရီး ဆောရီး အင်္ဂလိပ်လိုခေါင်းစဉ်ရေးတဲ့ သူက အဲလိုရေးထားတာကိုး အေ့ .. :D
08-02-2009, 08:49 AM
download ပေးဝူးလား ......
08-02-2009, 08:58 AM
သဘာဝ ပေးတဲ့အလှထက်ပိုမှာလား .....
08-02-2009, 11:28 AM
အိမ်ခေါင်မိုးက မိုးမလုံလဲ ငါတို့လုံးဝစိတ်မကုန်ပါ
ရေခံခွက်အောက် မိုးစက်တပေါက်ပေါက်ကျသံဟာ တွံတွေးကြီးတေးသံလား
စင်တင်ဇာတ်ထုပ်ထဲက အကောင်းစားတိုက်အိမ် တစ်လုံးနဲ့မလဲပါဗျို့။
ရွှေမြေအိုးမည်း နှုတ်ခမ်းရယ်တို ဆန်နီကြမ်းနဲ့ ၀မ်းတွေစို
အခုရထားတဲ့ လောကစည်းစိမ်တွေ နတ်ပြည်နဲ့ မလဲဖို့
အမေကောက်ညှင်းဆန် လက်တစ်ဆုပ်ပေါင်း နှမ်းထောင်းရင် နတ်ပေးတဲ့သြသဓဆေး
အတိတ်အနာဂတ်နဲ့ ပစ္စုပွန်မှာ တို့အိမ်က မခွဲကြေး
ပညာမတတ် ဉာဏ်နည်းတဲ့ဆင်းရဲသားတွေလို့ ကောင်းချီးသြဘာပေး
စိတ်မဆင်းရဲဘူးဟေ့ တို့အိမ် တစ်ခေါက်လောက် မင်းလာကြည့်တော့ သူငယ်ချင်း။
မဟာဂေါဏ ဘို့လည်ထောင် စူဋ္ဌဂေါဏ နောက်အငယ်ကောင်
အတူတစ်ကျင်းထဲစားတဲ့ တို့ရဲ့ နွားနှစ်ကောင် အမေ့ရဲ့သားတော်မောင်
မဟာအန္ဒ အကို့နာမည် စူဋ္ဌအန္ဒ ကျွန်တော်နာမည်
အနှိမ်ခံတောသားကျောမွဲ ဦးနှောက်နည်းတဲ့ အမေ့ရဲ့အားတွေ့ပဲ
ညီမလေးက နှီးထိုင်ဖျာ အဘကဆေးတစ်ဆုံဖွာ
မှောင်ရည်လရိပ်အောက်က တိတ်တဆိတ်ညတွေမှာ အမေ့ရဲ့တရားသံနာ
လူဟာ လောဘတရားနဲ့ ငရဲလမ်းသွားတဲ့ ဒုက္ခယက်ကောင်များ
ပညာမတတ် ဉာဏ်နည်းတဲ့ဆင်းရဲသားတွေလို့ နှာခေါင်းရှူံလက်ခါမလား
08-02-2009, 11:48 AM
IDM , Realplayer တို့ သွင်းထားရင် သီချင်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အပေါ်မှာ Download this video ဆိုတာ ပေါ်လာတယ် ..။ အဲဒါကို Click လိုက်ရင် ဒေါင်းလို့ ရပြီ .. File Type ကတော့ FLV နဲ့ ရမယ် .. ။
ှုIDM ကို သွင်းချင်ရင် အောက်က လင့်ခ်မှာ သေချာရှင်းပြထားပါတယ် ..။
ဘာမှ မသွင်းချင်ဘူး အဲဒီသီချင်းကိုပဲ ဒေါင်းလုတ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်လဲ ဒီမှာဒေါင်းလိုက်ပါ (http://www.mediafire.com/download.php?y5mtzymzo2d)
mediafire က ကျွန်တော့်ဆီမှာမရဘူး ... :( ifile နဲ့ဆိုရင်တော့ :4:
ifile နဲ့မှ ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ဒေါင်းပါ။
08-22-2009, 10:47 PM
မျိုးကြီး - မင်းသိဖို့ ကောင်းတယ်
09-14-2009, 03:11 PM
ဒို ၊ ရေ ၊ မီ ဆိုထားတဲ့ ...
10-09-2009, 10:59 PM
10-21-2009, 01:43 PM
အချစ်ဆိုတာ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကောင်းလို့ နားထောင်ကြည့်ကြပါလား
10-23-2009, 11:34 PM
ကောင်မလေးငယ်ငယ်လေးတွေကို ကြိုက်တဲ့ 
ဒီမှာ ပေးလိုက်မယ်နော် အရမ်းကောင်းတဲ့ ၀က်ဆိုက်
သီချင်း အသစ်တွေ အဟောင်းတွေ အကုန်လုံးကို အယ်ဘမ်လိုက် ဒေါင်းချင်လား ရတယ် :5:
pooh lay လာပြီလေ ရော့ ယူလိုက် :6:
:ok http://myanmarmp3album.com/ :ok
:applaus :applaus :applaus :applaus :applaus
အယ်ဘမ်လိုက်မလိုပါဘူး တစ်ပုဒ်ချင်းဆီပဲ လိုပါတယ် ဆိုတဲ့ ကိုကို မမ ဘော်ဘော် တို့အတွက် :harhar
:ok http://www.myanmarsongs.net :ok
12-10-2009, 09:16 AM
ကိုပူစူး ဆိုထားတဲ့ မင်းစိတ်တိုင်းကျ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါနော်
ကဲ ဗျာ နားမထောင်ခင် ကျွန်တော် အရင် ဆိုပြမယ်
:imm:(နင် စိတ်ဆိုးသွားပြီလား မုန်းပြီလား မေ့ပြီလား ပြောပါ ငါရဲ့ အပြစ် တစ်ခုကို နင်ပြန် ခွင့်လွှတ်နိုင်မလား ........)နောက်ထပ်ဆိုပြတော့ဘူးနော် ရှက်လို့ ဟီဟီ :6:
ကျွန်တော် ဆိုပြတာကို ကြိုက်လို့ အဲလေ ဟုတ်ပါဝူး သီချင်းလေး ကို နားထောင်ချင်ရင်တော့
ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်တော့ဗျာ (http://www.mediafire.com/?xrmy21hdmtw)
ကျွန်တော် အချစ်ဆုံး ကိုကြီး အငဲ ဆိုထားတာပါ
(မယုံနိုင်ဘူး နင်စွန့်ခွာသွားတဲ့ အဝေးမှာ ..သံယောဇဉ် ဖြတ်ခဲ့တဲ့...) :6: ကြော်ငြာ fight.gif ဟီဟီ
ရော့ ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်တော့ဗျာ (http://www.mediafire.com/?mzykxrezq0y)
Lao Shu Ai Da Mi တဲ့ ဗျို့ wo ei ni သီချင်းလို့လဲ ခေါ်ကြတယ် ဗျ ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးပါ :imm:
(ဝေါ အိုက် နီ ... အိုက် ကျန် နီ .. ကျုံ ရှောင် လောက် ရှု ... အိုက် သာ နီ ) ၀ က တရုတ်ကြီး ဟုတ်ဝူးနော် :3:
တရုတ်စပ် (.. တခြား မတွေးကြေး) :6: ၀ လဲ ကြိုယ်လယ် လု တို့လဲ ကြိုက်ကြမယ် ထင်တယ်ဝေး
အောက်မှာ ယူလိုက် ဝေး
ရော့ :ok [url=http://www.mediafire.com/?5ydmv93m0nv]ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်တော့ဗျာ :ok
12-16-2009, 09:05 AM
သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ ပူစူးဆိုထားတာပါ
ငါကို ချစ်မယ့်လူ စီးရီးထဲက ပါ (ကိုသိုးကျောင်းသား
ရော့ :ok [url=http://www.mediafire.com/?awnzoljmj0j]ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်တော့ဗျာ :ok
12-31-2009, 06:18 PM
ကျွန်တော် ကိုလူထွေးဘလော့မှာတွေ့လို့ ကြိုက်တာနဲ့အားလုံးခံစားရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်......
05-13-2010, 11:10 PM
သောကဘုံတဲ့ ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ် သီချင်းSeries ထဲမှာ The Jungle သီဆိုထားတဲ့သီချင်းလေးပါ
တစ်ခါက မိုးညများဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးထဲက ဇာတ်ဝင်တေးတစ်ပုဒ်ပါ
မိုးနှင်းဖြူဆိုတဲ့ကောင်မလေးအတွက် မြတ်မင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးက ရေးစပ်ခဲ့တဲ့သီချင်းလေးပါ
၁၉၉၃-၉၄ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ
05-14-2010, 09:20 AM
ချစ်တယ် ဆိုတဲ့သီချင်းလေးတစ်ခုပါ။ သူများတွေတော့ မသိဘူး ကျွန်တော်တော့တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ နားထောင်ကြည့်ပါလို့လဲ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်
သီချင်းကို ဒီမှာ (http://www.mediafire.com/file/tagnynmtnmd/Ch%21t%20t@l.mp3) Download လုပ်နိုင်ပါတယ်
Here is the song in &quot; Two inaMillion &quot; which is in MEF Journal.
Key To My Life lyrics
You&#039;re the key to my life...
Rain on the window covers the trace
Of all the tears that I&#039;ve had to waste
And now I&#039;m missing you so
And I won&#039;t let you go away
Stain on the desktop where coffee cups lay
And memories of you forever will stay
And the scent of your perfume
And the smile on your face will remain...
And I never gave up hope when things got me down
But I just bit on my lip and my face began to frown
Cos that was just my pride and I&#039;ve nothing else to hide
And now the way is clear and all I want to say is..
All of my life the doors have been closed now
And all of my dreams have been locked up inside
But you came along and captured my heart, girl
You&#039;re the key to my life
Year after year, was blaming myself (blaming myself..)
For what I&#039;d done, just thought of myself
I know that you&#039;ll understand (you&#039;ll understand...)
This was all my own fault, don&#039;t go away..
But I just bit on my lip
And my face began to frown
Cos that was just my pride and I&#039;ve nothing left to hide
And now the way is clear and all I want to say is...
Girl you know that I feel for you
There ain&#039;t nothing that I wouldn&#039;t do
Stop the thunder and the pouring rain
You&#039;re the one that&#039;s going to stop the pain
Listen to me can&#039;t you hear what I say...
06-11-2010, 10:21 PM
လင်းလင်း ဆိုထားတဲ့ တောင်ကြီးသားတွေပျော်တဲ့တန်ဆောင်တိုင် ဆိုတဲ့သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် - အဝေးရောက်တောင်ကြီးသားများ စိတ်မခိုင်ရင် နားမထောင်ရ ( ကျွန်တော်အဲဒီ သိချင်းနားထောင်ရတုန်းက တန်ဆောင်တိုင်ကြီး အလုပ်ကလည်းခွင့်မရ ဟူးးးးးးးးး :angry: :angry: )
06-25-2010, 06:46 PM
07-06-2010, 02:22 PM
jenny ရဲ့ အရုပ်မ (http://www.sendspace.com/file/b6awl4)
08-26-2010, 07:50 AM
သျှီ ရဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ဆိုတဲ့ သီချင်းအသစ်လေးပါ ။
အရမ်းကြီးကို အေးအေးဆေးဆေးဆိုထားတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ။
သတိ။ မျက်ရည်လွယ်လွယ်ကျတတ်သူများ နားထောင်ရန် မသင့် ;D ;D ;D
မိုးကောင်းကင်ထဲ .. ပျံလွှား
တောင်တွေကျော် .. ကြယ်တွေခူး
လမင်းကိုမျှားခဲ့တာ .. အကြိမ်ကြိမ်ပေါ့
အိပ်မက်ထဲမှာ .. ။
မီဒီယာလား (http://www.mediafire.com/?7moiabmrpcvsj7q)၊အိုင်ဖိုင်လား (http://ifile.it/bmw69l3)
08-26-2010, 08:07 AM
ရတနာဦး ဆိုထားတဲ့ ကော်ဖီသောက်တိုင်းသတိရတယ်
မူရင်းက ကိုဇော်ဝင်းရှိန်ပါ ..
ပျောက်ဆုံးခဲ့သူမင်းကို ရှာနေပါတယ် ..။
မီဒီယာလား (http://www.mediafire.com/?5ywn08ck97mr462)၊အိုင်ဖိုင်လား (http://ifile.it/ewy6xtj)
08-31-2010, 02:10 AM
ဒီသီချင်းကတော့ တော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ် ရှာတာလဲ အခုမှတွေ.တယ် Bunny phyo ရဲ. morning star ပါ တော်တော်ရှားမယ်ထင်တယ်